ရိုးသားမှုနဲ့ နှိမ့်ချမှုဟာ ကြီးမြတ်ခြင်းရဲ့ အမှတ်လက္ခဏာနှစ်ခုပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရိုးသားမှုနဲ့ နှိမ့်ချမှုဟာ ကြီးမြတ်ခြင်းရဲ့ အမှတ်လက္ခဏာနှစ်ခုပါ
ရိုးသားမှုနဲ့ နှိမ့်ချမှုဟာ ကြီးမြတ်ခြင်းရဲ့ အမှတ်လက္ခဏာနှစ်ခုပါ
Posted by Thuyazaw on May 15, 2012 in Creative Writing | 36 comments
ယခုတစ်ခေါက် တင်ပြချင်တာလေးကတော့ နှိမ့်ချစွာကျင့်ကြံပါဆိုတာလေးပါ……. မပျင်းမရိဖတ်ပေးမယ်ဆိုလျှင်ဖြင့် ဗဟုသတုလေးများ တိုးပွားလေမလားဆိုပီး ရိုးသားစွာ ရေးချချင်တာလေးကတော့ ဒီလိုလေးပါ…….
မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချပါ…..ထောင်လွှားမှုမလုပ်ပါနဲ့….မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ မာန်မာနထောင်လွှားပြီး ယုံကြည်မှုရှိတာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချပြီး ယုံကြည်တာက ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်….. နှိမ့်ချမှုမပါဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုဟာ အဓမ္မဆန်တယ်…… အတ္တများတယ်….. နိုင်လိုမင်းထက်လုပ်ရာကျလွန်းပါတယ်…..
နှိမ့်ချခြင်းဟာ မြင့်မြတ်မှုအပေါင်းရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်လေးပါပဲ…. အလားတူ နှိမ့်ချခြင်းဟာလဲ ကြီးကျယ်မှုအပေါင်းရဲ့ လက္ခဏာလဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ လူမှုပညာရှင်ကြီးတွေကဆိုထားပါတယ်….. ကောက်နှံတွေဟာ အထဲမှာ အဆံတွေပြည့်နေရင် ညွှတ်ပြီးတော့ ပျော့ပြောင်းနူးညံ့တဲ့သဘောကို ဆောင်နေတယ်…. မြန်မာစကားပုံလဲရှိပါတယ်…. ပြည့်တဲ့အိုးဟာ ဘောင်ဘင်မခတ်ဘူး တဲ့။ နှိမ့်ချတယ်ဆိုတာ ကျိုးနွံသိမ်မွေ့ပြီး မာနမထားဘဲ နေထိုင်တာကို ပြောတာပါ….. ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေးသိမ်စေအာင် ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး….. ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ နှိမ့်ချမှုဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး မှားယွင်းတဲ့နှိမ့်ချမှုဟာ နိမ့်ကျအောင် လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်…. ဆိုလိုချင်တာလေးကို ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်……
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက မြင်းတစ်ကောင်ကို စီးလာတဲ့ လူကြီးတစ်ဦးဟာ စစ်သားတွေ ကြီးမားလေးလံတဲ့ သစ်တုံးကြီးကိုရွှေ့နေတဲ့နေရာကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်….. အဲဒီနေရာမှာ တပ်ကြပ်တစ်ယောက်က သူ့စစ်သားတွေကို ရပ်ပြီးကြည့်နေတာကို ထိုမြင်းစီးလူကြီးက တွေ့ရတယ်….. အဲဒါနဲ့ မြင်းစီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက တပ်ကြပ်ကိုမေးတယ်….. စစ်သားတွေကို မကူညီဘူးလား ….လို့မေးတော့ တပ်ကြပ်က ငါကတပ်မှူးပဲ၊ အမိန့်ပဲပေးတယ်….. လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်….. မြင်းစီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက မြင်းပေါ်ကဆင်းပြီး စစ်သားတွေကို ၀ိုင်းကူပြီး ရွှေ့ပေးတဲ့အခါ သစ်တုံးကြီးဟာ ရွေ့လားလာခဲ့တယ်….ပြီးတော့ သူကအေးဆေးစွာပဲ မြင်းပေါ်ပြန်တက်ပြီး စောစောကရပ်ကြည့်နေပြီး အမိန့်ပဲပေးတယ်ဆိုတဲ့ တပ်ကြပ်နားကိုပြန်လာပီး….နောက်တစ်ခါ ခင်ဗျားလူတွေအတွက် အကူအညီလိုတဲ့အခါ တပ်ရင်းမှူးချုပ်စီကို သတင်းပို့ပေးပါ လို့ပြောပြီး ပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်……… သူပြန်ထွက်သွားပြီးမှ တပ်ကြပ်နဲ့ သူ့စစ်သားတွေက အဲဒီမြင်းစီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာ ဂျော့ဝါရှင်တန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ကြရတယ်…….
ဆိုတော့ အဲဒီဖြစ်စဉ်လေးဟာ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ….. အောင်မြင်မှုနဲ့ နှိမ့်ချမှုဟာ နမူနာလုပ်ပြပြီး အဆင့်ဆင့်လက်လွှဲလို့ရတယ်.။ ရိုးသားမှုနဲ့ နှိမ့်ချမှုဟာ ကြီးမြတ်ခြင်းရဲ့ အမှတ်လက္ခဏာနှစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဟု ပြောဆိုရင်း ကောက်နှုတ်ချက်လေးအဆုံးသက်ခွင့်ပြုပါ…….
မှတ်ချက် ။ ။ မည်သူ့ကိုမှ မရည်ညွှန်းပါ….. လွှတ်လပ်စွာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်……..
ဘာမှလာရှင်းပြမနေနဲ့ ရည်ရွယ်ရင်ရည်ရွယ်တယ်ပေ့ါ ………. အွန်း
နောက်မှဖတ်မယ် ဆက်မန့်မယ် လာထား ၁၀
ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ရှင်းပြတော့ဘူးနော်….. ရော့ ၁၀ ယူသွား……ခွိ
နှိမ့်ချမှုဟာ ကြီးကြယ်မှု ဆိုတာ မှန်ပါတယ် ..
ဒီလိုဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမွှန်းတင်တာ .. ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ် ပြောတာ၊ ပြတာ လည်း ထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ ရဲ့ မရှိမဖြစ်လက္ခဏာ တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖေါ်မသူတော် ဆိုတာ မှန်တဲ့နေရာရှိသလို မှားတဲ့နေရာလည်း ရှိပါတယ် ..
သင် ပညာရှိနေရာမှာ နေတယ်ဆိုရင်တော့ မှန်ကောင်း မှန် နိုင်ပေမယ့် ..
သင် ဘုရင် နေရာ CEO နေရာမှာ ဆိုရင်တော့ လုံးဝ မှားကောင်းမှားနေပါလိမ့်မယ် ..
လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို…….. သင့်တော်မယ်ထင်ရင် သင့်တော်သလို ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ဖို့လဲ လိုအပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်….
မလစ်ရင် ဘားမှ မလုပ်ပါဘူး
နှိမ့်ချလားမချလားဆိုတာတော့ ပြောမနေနဲ့တဖြည်းဖြည်း လူက ကိုင်းတောင်လာပါပြီ..
တစ်နေကုန် ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး ကုန်းကုန်း ကုန်းကုန်းနဲ့ရွာထဲ ကင်းလှည့်နေရလို့ လားတော့ မသိပါဘူး
ရိုးရိုးသားသား ဖိုးသခွားဟုတ်ပါဘူး ဗိုက်ကလေးပါ……. ကင်းလှည့်တာလေးလဲ လျှော့ကွယ်….. ပြန်နောက်ဒါနော်……ဟီဟီး
“ကောက်နှံတွေဟာ အထဲမှာ အဆံတွေပြည့်နေရင် ညွှတ်ပြီးတော့ ပျော့ပြောင်းနူးညံ့တဲ့သဘောကို ဆောင်နေတယ်…. မြန်မာစကားပုံလဲရှိပါတယ်…. ပြည့်တဲ့အိုးဟာ ဘောင်ဘင်မခတ်ဘူး တဲ့။ နှိမ့်ချတယ်ဆိုတာ ကျိုးနွံသိမ်မွေ့ပြီး မာနမထားဘဲ နေထိုင်တာကို ပြောတာပါ။”
“ကျေးဇူးရှင်မိခင် က ဘာပြောလဲဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အရည်အချင်းပြည့်ဝ တဲ့သူဟာ ဘယ်တော့မှ မာန တစ်ထောင်ထောင်နဲ့ မနေဘူးတဲ့။ မာန ဆိုတာ အလကားတဲ့ ဘာမှ အသုံးမ၀င်ဘူးတဲ့။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ဆုံးရှုံရတက်တယ် တဲ့။ ကိုယ်စွမ်း ကိုယ်စ ရှိပြီး အောင်မြင်အောင်လုပ် ခဲ့တဲ့သူဟာ လဲ လူတိုင်းကို ကိုယ်ချင်းစာတက်တယ် တဲ့။ ကိုယ်ဟာ တစ်နေ့မှာ အောင်မြင်တဲ့ အဆင့်တစ်နေရာရောက်ခဲ့ ရင်လည်း အော် ငါလည်း အရင်တုန်းက ဒီလို ဘ၀မျိုးကြိုးစားခဲ့ပါလား ဆိုတာမျိုးပြန် အမှတ်ရနေရမယ်တဲ့။ ဆင်းရဲတဲ့ သူတွေကို မနှိမ်ရဘူးတဲ့ တချို့ သူတွေဟာ အကြောင်းမဲ့ ဆင်းရဲနေတာမျိုး မဟုတ်ပဲ သူတို့ ကိုပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းနဲ့ တွေ့မယ် ကြိုးလဲ ကြိုးစားမယ် ဆို ချမ်းသာတဲ့ သူတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့။ ”
ဒီစာသားလေး ဟာငယ်ငယ် ကတည်း က အမေ ကအမြဲပြောတဲ့ စကားလေး ပါ။ မူလတန်း တုန်း က သင်ခန်းစာမှာလည်း စပါးနှံအကြောင်းကို သားအဖ စကားပြောတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ သင်ရဘူးပါတယ်။ လူမှုဘ၀ထဲကို ရုန်းကန် ရပြီ လို့ဆို ကတည်း က ဘ၀ကို ဒီစကားပုံ လေးနဲ့ အတူတူနေထိုင်ရဲလားလို့ အမြဲ ဆုံးမ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း ထပ်ဆုံးမဖြစ်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပါ။ လူသားတိုင်း လူသားတိုင်းလဲ အမြဲ စပါးနှံလို ကျင့်ကြံနိုင် ကြပါစေ။
ပိုစ့်ရေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
ခညား ကို နေလှမ်းပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ပုံ၂ပုံ ရဘီ…
ဟေ့ မိဂီ မလုပ်နဲ့နော် ပုံကြီးပျူးတူး ပြဲတဲ ရယ်။ လက်ဆော့တဲ့ ဆရာ့ ကိုတော့အားနာပါရဲ့တော်။
ကျွန်တော့်ပို့စ်မှာ ၀င်ရောက်အားဖြည့်ပေးတဲ့အတွက် မမအုံရေ ကျေးကျေးပါ……..
(မည်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ.. တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင်ခွင့်လွှတ်ပါ…)
သူကြီးကိုအရမ်းစိတ်ဆိုးတယ် ……….. သူများအမျိုးတွေပုံတွေပါနေတယ် …… သူတို့ခင်မျာ ယူနီဖောင်းလေးတွေ အခုလိုလူမြင်သူမြင်မှ ကောင်းကောင်းဝတ်ရတာ ပွဲရှိမှလေ အဲဒါလေးပေမှာ စိုးလို့ လက်ညိုးထိုး မတ်တပ်ရပ်နေတာကို အခုတော့ ရွာကလူတွေမြင်ရင် သူများအမျိုးတွေကို ကဲ့ရဲ့တော့မယ် ……. စိတ်ဆိုးတယ် စိတ်ဆိုးတယ် သူကြီးကို ……….
ခိုင်ခိုင်လွဲသွားပြီထင်တယ် .. သူကြီးက ၀ါဝါလေး ပုခုံးပေါ်တင် စည်းရိုးပေါ်ရပ်နေသူကို လို့ ထင်ပါတယ် … ခိုင်ခိုင်ပြောတဲ့ အမျိုးတွေက အားလုံး လုပ်နေတဲ့ ပုံပါ ။ သူကြီး ညွှန်းသူဘေး က ထိုင်နေသူကလည်း လုပ်ထားတဲ့ ပုံရှိတယ် ။ ဘောင်းဘီခေါက်တင်ထားတဲ့ ပုံဆိုတော့…
ကျန်သွားလို့ .. အုပ်ချုပ်သူဆိုတာလည်း လိုတာပါဘဲ .. ဒါပေမဲ့ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့ နေရာဖြည့်ပေးဖို့တော့လိုပါသည်
မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြဿနာက.. သိကိုမသိတော့တာလို့ထင်မိတယ်..
လူထုအများစုက.. ကိုယ်က..ဘယ်နေရာရောက်လို့.. ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို.. သိကိုမသိတော့တာ..
အဲဒါကို.. ပုံမှန်လို့ထင်နေတာက.. တကယ့်ပြဿနာခင်ဗျား…
ဦးဦးပါဆို.. သိသိနဲ့.. မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလေ..
ကျနော်ပန်းတနော်အလှူပြန်လာပီးဂတဲက ရွာထဲဝင်ရတာအဆင်မပြေဘူး တစ်ခါမန်းပီးရင် ၀ါးပရက်စ်အယ်ရာ နောက်လုံးဝပြန်ဝင်မရတော့ပြန်ဘူး အဲ့ဒါဘာဖြစ်တွားဒါလဲ ?? သဂျီးတိုးပေးတဲ့ရာထူးကို မနိုင်လို့များလားမသိဘူးနော် :D … ပီတော့အဲ့ရာထူးတိုးတယ်ဆိုတာကို ဘယ်နားရှာကြည့်ရလဲခည .. ကျနော့် ချာတူးလန် အကောင့်ကတော့
ဘာမှထူးချားတာမတွေ့ ဘူးခည အဲ့ဒါလေးဝင်အထွန့်တက်တာပါ ခည
တိုဂျီးတူရ ….. ကြားဖူးတဲ့တရုတ်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်
(လိမ္မာတဲ့မြင်းက အခိုင်းခံရမယ်။ ရိုးသားတဲ့လူက အလိမ်ခံရမယ်။) တဲ့ အနော်တို့နှစ်ယောက်ရိုက်ပွဲပုံလေးများ ရနိုင်မလား ခည !! :D
ရပါမယ် ချာတူးလေးရေ….. ကိုတူရ Gtalk လိပ်စာလေး အပ်ပေးပါ…. ဒါမှပို့ပေးလို့ရပါမယ်…. Thuyazaw21451@gmal.com
ရာထူးရှိပြီးသားသူတွေ.. . ရာထူးမတက်ပါဘူး.. သားသားရေ..
သူကြီးရေ တားတားတစ်ခုတင်ပြချင်ပါတယ်….ဂလိုပါ…..သားသားက သူကြီးဆိုဒ်ထဲကို စ၀င်ဝင်ချင်း ဘာပွိုင့်မှ ရပါဘူးခင်ညာ…… သူများတွေ စစချင်းမှာ လေးထောင်က စရတယ်လို့ သိရပါတယ်…. အဲဒါ ဘိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေး သိချင်ပါတယ်……သားသား ရာထူးလဲတိုးပါဘူးခင်ညာ….ဘာရာထူးမှလဲရှိပါဘူးခင်ညာ……
အင်း ဒီခေတ်ကြီးထဲမတော့ ရိုးသားမှုအားကိုးပြီး..
ငမိုက် နင့်ပြင်ရှိသေးလား ဖြစ်မယ်.လို့.ယုံကိုယုံကြည်တယ်ဗျ…
မက်မက်ရေ အချိန်အခါနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖို့ ဆိုလိုတာပါ…….
လောကဇါတ်ခုံကြီးပေါ်မှာ ကျရနေရာကနေ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ လိုအပ်တာ ကလားဗျ။
ကိုပေကြီးပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်ဗျ ….. သရုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကလဲ လှပဖို့လဲလိုသေးတယ်မဟုတ်လားဗျ…….
ပိုစ့်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မဆိုင်ပေမယ့် အောက်က အကြောင်းရာနဲ့ တိုက်ဆိုင် တာ လေးတွေ မကြာခဏကြုံဖူးပါတယ်။
၂ ယောက်လာက် ကပဲ အလုပ်လုပ်နေပြီး ၅ ယောက် လောက် ကလက်ညှိုး တထိုးတိုး နဲ့ ခိုင်းနေတာကိုမကြာခဏတွ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒါ မြို.တော်စည်ပင်လေ…. အပြာရောင် ယူနီဖောင်းနဲ. ခိုင်းတဲ့သူက အများကြီး အောက်က မြောင်းဆည်တဲ့ သူတွေက နဲနဲ….
အဲဒါ မြို.တော်စည်ပင်………… လို. တားတားမပြောဘူးနော်…
ကိုယ့်ဘက်ကရိုးသားတာကို တစ်ဖက်သားက ကိုယ့်ကို အတယ်ညံ့တယ်လို့ အထင်ခံရဖူးတယ်——–ဒါပေမယ့်အဲဒီအတွက်တော့ ကို့လိပ်ပြာကိုယ်လုံတယ် တစ်သက်လုံး
ကိုယ့်ဘက်က ရိုးသားမှုကို သူများက ညံ့တယ်ထင်လဲ ကိုယ့်ဘက်က ရိုးသားမှုက တစ်နေ့မှာ အနိုင်ယူသွားမှာပါဗျာ……. တစ်ခုတော့ရှိတယ် အနိုင်ယူလိုစိတ်မရှိပါနှင့် ဆက်လက်ရိုးသားပါဗျာ
အော်မဲတူမရယ် ညည်းတော်တော်ရင့်ကြတ်နေပြီးပေါ့လေ…. အေးလေ အခုလို အသိအမြင်တွေရှိနေတော့ ညည်းသားသမီးတွေ ကံကောင်းတာပေါ့…
မဲတူမရေ. အားပေးနေတယ်နော… :D
ကိုတိုက်ရေ အားပေးနေတဲ့အတွက် အရမ်းအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ……
ကြီးမြတ်တဲ့ မင်္ဂလာတစ်ပါး ပေါ့
ကို ကမ်းဝေးကြီးရေ တိုတိုနဲ့ထိမိလှပါပေတယ်ဗျာ……… ကျေးကျေးဗျာ
လေးလေးရေ အားပေးလို့ ကျေးကျေးပါ…… လေးလေးဖြစ်စေချင်သလို ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်
သဂျီးမင်းပေးတဲ့ရာထူး ဘိုလိုမျိုးပါလိမ့်ဆိုပီးစမ်းပီး မန်းကြည့်တာ … :D
ချာတူးရေ ဘာရာထူးလဲကွယ်……တိချင်တယ် တိချင်တယ်လေ ငါလေ အို့ဟို့
ရိုးသားမှုနဲ့ နှိမ့်ချမှုဟာ ကြီးမြတ်ခြင်းရဲ့ အမှတ်လက္ခဏာနှစ်ခုဆိုတာ .. လက်ခံပေမယ့် … သူတပါးစော်ကား ၊ အနိုင်ကျင့် ၊ မိုက်ရိုင်းတာခံဖို့ ၊ အခွင့်ရေးပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတနှစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူးနော် … ။